HIDDA MALEE XANNACHI HIN DHIIGU! Dhugaatti mootummaan biyya bulchaa jiru Ilmaan Oromoon hoogganamaa jiraa?Abiy Ahimad:Neftegna!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHIDDA MALEE XANNACHI HIN DHIIGU! Dhugaatti mootummaan biyya bulchaa jiru Ilmaan Oromoon hoogganamaa jiraa?Abiy Ahimad:Neftegna!!
-Haati isaa Amaara; jaalalli inni haadhasaaf qabu adda ta’uu irra deddeebi’ee midiyaalee adda addaatiif ibsee jira
-Haati manaasaa Amaara (Goondaree)dha.Ijoolleen Abiy afaan Oromoo jecha tokko dubbachuu hin dandahani.
-Waa’ee abbaa isaa dubbachuu hin
-Edda aangootti dhufee bakka furtuu mootummaa federaalaa ilmaan Amaaraan guutaa jira ( Gaafatamaan tikaa bittittii Amaara, caasaan tikaa fi waraanaa suuta suutaan ilmaan Amaaraan guutamaa jira)
-Dhaabilee mormitootaa warra akka G7 fi Semaayaawwii qabatee:
1.Sirna federalism amma jiru adeemsaan ethnic federalism irraa gara geographic federalism tti jijjiiruuf murteessee jira
2.Dhageettii (Popularity)amma qabutti gargaaramee dhiyootti sirna mootummaa ( gara presidential tti ) jijjiiruuf murteessee jira. Kana booda biyyattiin kallattiin prezedantii kallattiin filattuun gaggeeffamti ( innis baroota dheeraaf Abiy ta’a).
3.Sababa biyyi tasgabbii hin qabdu jedhuun yeroon filmaataa yoo xiqqaate waggoota shaniif ni dheereffama; Abiy filannoo malee biyyattii waggootii shanan dhufaniif ni gaggeessa
-Abiy waa’ee tokkummaa Itiyophiyaa jabeessuun sabboonummaa Itiyophiyyummaa dagaagsuu malee dhaaba ODP jedhamuuf dhimma hin qabu ( Adeemsa keessa dhabilee siyaasaa walitti dhufanii EPRDFn hundeessan walitti baqsuun maqaa EPRDF jedhu jijjiiruuf murteeffatee jira)
-Ummata Oromoo irratti waraana labsuun bara TPLF illee haala ta’ee hin beekneen gara jabeenya guddaan qeerroo Oromoo ficcisiisaa jira; qe’e Oromoo dirree waraanaa taasisaa jira; Oromiyaa bakkoota hedduutti dhiigni dhangala’aa jira; ilmaan Oromoo hadamfamanii kaampii waraanaatti guuramaa jiru
Oromoon herrega kanas qalbeeffadhu:
– Hogganootni Koreen Gidduu ODP %28 makaa yoo ta’n % 18 qulqulluu Amaaraa ykn Tigree dha ( dhiyootti dhimma kanarratti gabaasni guutuun qulqullinaan qophaahe isin qaqqaba.)
Hoogganoota ODP keessa warri dhugaan Oromoo fi Oromummaaf quuqaman ni jiru.Qabatamaan wanni mul’ataa jiru garuu warri % 46 ODP dhuunfatanii akka barbaadanitti oofaa jiru.
Hidda malee xannachi hin dhiigu!Oromoon “mootummaa Oromoo”tu na bulchaa jira jedhee akkuma sirbe yeroon itti qabatamaan dhiiga boohu fagoo hin ta’u.
“General Haacaaluun jedhama jedhe restricted number dhaan naaf bilbile amma sirukutuuf enna garuu sijjeesuun feenu kabajaan harka kennadhu naan jedhe. Ani bilbila irraatti cufannaan ,Yerosuma helicopter dhufee boombii Roobsan. Diiduma tumaan nan arganne. Kun kaleessa guyyaa tahe. Har’as dhuftee bakkuma sana tumaa oolte. Achii deemteemmoo magaala qeellem naannoo high school boombiin reebdee sokkite. Humna lafootiin kallattii sadiin ofirraa faccifnee amma teenyeetuma wal ilaalaa jirra. Nu madoos tahe du’a tokkoyyuu hin qabnu ammatti galata Waaqaati, isheeni garuu goondaa abidatti naqan taate.
Komi fi #Ejjanno Qeerroo Godina Boorana!
Mootummaan Abiy weerara Oromiyaa lixaatti gaggeessaa jira. Weerara kana keessaa fi alaan kanneen gargaarsa gochaa jiran humnoota Habashaa jibbinsa guddaa Oromoo irraa qabanii dha. ABO balleessuu irratti humnooti xiyyeeffatan kun biyya keessatti humnoota tikaaf odeeffannoo kannanii sabboontota hiisisaa jiru;
Oromoo diinni waan qabu maraan sitti duulaa jira; duula diinotaa fashaleessuf hidhannoo kee jabeeffadhu!!
ከበሮ እየተደለቀ ነው
በኦሮሞ ህዝብ መቃብር ላይ አሃዳዊት ኢትዮጵያን ለመመስረት የታቀደው ጦርነት በመጀመሩ ፌሽታ ተደርጓል።
Abiy Ahmed: Ethiopia’s prime minister is Mengistu H-Mariam #II